अक्षयको लक्ष्मी बम र वरुणको कुली नं. १ तिहारमा सँगै रिलिज हुने « रिपोर्टर्स नेपाल
अक्षयको लक्ष्मी बम र वरुणको कुली नं. १ तिहारमा सँगै रिलिज हुने
एजेन्सी, १३ असोज । सिनेमा घर अक्टोबरको दोस्रो साता भारतमा खुल्ने तयारीमा छन् । ६ महिनादेखि सिनेमा हलमा लगाएको ताल्चा अक्टोबरमा खु्ल्ने भएको हो । यति लामो समय बन्द हुँदा सिनेमा क्षेत्रको अवस्था चौपट भएको छ । यस्तो समयमा केही निर्माताले कम मुनाफा भएपछि फिल्म ओटीटी प्लेटफर्ममा बेचेका छन् । यसैमा अक्षय कुमारको लक्ष्मी बम र वरुण धवनको कुली न.१ पनि छन् । यी दुवै ठुला फिल्म हुन् र यीनीहरुबाट सिनेमा घरमा राम्रो व्यापार गर्ने आशा थियो ।
भारतीय समाचार अनुसार यी दुई फिल्म तिहारमा ओटीटी प्लेटफर्ममा रिलीज हुने भएका छन् । कुली न. १ अमेजन प्राइम र लक्ष्मी बम नेटफ्लिक्समा रिलीज हुने भएका छन् । तिहार जस्तो चाँडमा दर्शकको लागि यी फिल्म ठुलो सैगात हुनेछ र पहिलो पटक यति ठुलो फिल्मको टक्कर ओटीटी प्लेटफर्ममा हुनेछ ।
सामान्यतया फिल्महलमा सामान्य फिल्मको टक्कर हुन्छ, जतिबेला धेरै धेरै बजेटका फिल्म एकैदिन रिलीज हुन्छन् । ओटिटी प्लेटफर्ममा पहिलो पटक यस्ता ठुला फिल्मले एक आपसमा टक्कर गर्दैछन् । दुवै ठुला ब्यानरका फिल्म हुन् र दर्शकमाझमा पनि दुवैको उस्तै क्रेज छ ।
वास्तवमा अक्षय कुमारको लक्ष्मी बम तमिल मुवी मुनी २ः कंन्चनाको हिन्दी रिमेक हो । राघव लारेन्सद्धारा निर्देशित यस फिल्ममा किआरा आडवाणी पनि छन् । अर्को फिल्म कुली न. १ १९९५ मा रिलीज भएको फिल्मको रिमेक हो । डेविड धमनले निर्देशन गरेका यो फिल्ममा वरुण धमन, सारा अलि खान र परेश रावल मुख्य भुमिकामा रहेका छन् ।
काठमाडौं, ३ कार्तिक । नायक पल शाह र रियाशा दाहालको अभिनय रहेको ‘माछि भुल्यो’ लोक
काठमाडौं । फिल्म ‘चोर र पुलिस’को छायाँकन सुरु भएको छ । आरएल लामाको निर्देशनमा बन्न
लागुऔषध प्रकरणमा अर्जुन रामपालको प्रेमिकाको भाई पक्राउ
एजेन्सी, ३ कात्तिक । सुशान्त सिंह राजपुतको विषय पछिल्लो समयमा लागुऔषधमा तानिएपछि एनसीबीले लगातार एक्सन
सैफ अली खानको ८ अर्बको महल
बलिउड अभिनेता सैफ अली खानको पटौदी प्यालेसको बारेमा धेरै मानिसहरुलाई थाहा छ । हाल सैफ
आदित्यले श्वेतासँग विवाह गर्ने भनेपछि उदित नारायणले यसो भने
एजेन्सी, ३ कात्तिक । गायक आदित्य नारायण वर्तमान समयमा विवाहको खबरले चर्चामा छन् । उनले
कंगना रनौटमाथि अदालतले दियो एफआईआरमा मुद्दा हाल्ने आदेश
एजेन्सी, २ कात्तिक । पछिल्लो समयमा बलिउड अभिनेत्री कंगना रनौट एक पछि अर्को गर्दै समस्यामा
ओम पुरीले ढाबामा भाडाँ माझ्थे
एजेन्सी, २ कात्तिक । बलिउडबाट हलिउडसम्म दमदार अभिनय गरेर देश तथा विदेशमा आफ्नो अभिनयले सबैको
धर्मेन्द्रसँग धेरै समय बिताउन नपाएको हेमाको गुनासो
एजेन्सी, २ कात्तिक । बलिउडकी ड्रिम गर्ल हेमा मालिनीले भर्खरै मात्र आफ्नो ७२ औं जन्मदिन